Omakadebona boMkhonto we Sizwe bazoduba ingqungquthela ye-ANC | News24
Omakadebona boMkhonto we Sizwe bazoduba ingqungquthela ye-ANC
Lizeka Tandwa. News24
Johannesburg – Iqeqebana lamalungu omakadebona bophiko lwezempi lwe-African National Congress (ANC), Umkhonto we Sizwe (MK) angeke lube yingxenye yengqungquthela yenqubomgomo ye-ANC ezoba ngasekupheleni kukaJuni.
Le ngqungquthela iyisiphazamiso nje esilimazayo, owayeyilungu loMkhonto we Sizwe futhi eyiNhloko yeSANDF, uGeneral Siphiwe Nyanda usho kanjalo eLiliesleaf, eRivonia, ngoLwesibili.
Ikomiti lomkhandlu kazwelonke womakadebona boMkhonto yilona elithathe lesi sinqumo.
Lo mkhandlu wabunjwa ngonyaka ka-2016 yilabo ababengojenene kanye no-commissar boMkhonto ngokunikezwa umyalelo wezepolitiki yiMK Military Veterans' Association (MKMVA), neholwa uKebby Maphatsoe. Awulona uhlaka lwe-ANC olunikwa indawo yalo noma ukumeleleka ngokusemthethweni.
OLUNYE UDABA:AbakwaGupta kubathathe izinyanga ukukhokhela izindleko zomshado 'wezimanga'
“Ikomiti elilawulayo selinqume ukuthi lingazihlanganisi nalutho nengqungquthela yenqumbomgomo ye-ANC,” kusho uNyanda.
Labo makadebona bathi okunalokho kudingeka ingqungquthela yokubonisana ukuze amalungu ezoqhamuka namashu okugwema ukwehlelwa kweqembu ukwesekwa kulandela ukwehla okukhulu okubonakale ngokhetho lohulumeni basekhaya ngomhlaka-3 ku-Agasti, ngonyaka odlule.
I-ANC yalahlekelwa omasipala abakhulu abanga-metro - iGoli, iTshwane, kanye neNelson Mandela Bay - nabagcina bephathwe ngokubambisana amaqembu aholwa yiDemocratic Alliance (DA).
UNyanda uthi ukwenza ingqungquthela yokubonisana ibe yingxenye yengqungquthela yenqubomgomo, njengoba abaholi be-ANC babeka, angeke kuze kuthele zithelo ngoba angeke ikwazi (ingqungquthela) ukuthatha izinqumo.
Ingqungquthela yenqubomgomo ye-ANC ihlelelwe ukuba ibe ngomhlaka-30 kuJuni kuze kube umhlaka-5 kuJulayi.